Nhau - Tarisiro yekuwachisa mapurasitiki uye kushandisazve vanhu vanogadzirira
Tarisiro yekuwacha epurasitiki uye kushandiswazve vashandi
Muna Chikunguru 2017, raimbova Bazi rezvekudzivirirwa kwezvakatipoteredza rakagadzirisa uye ronyora mhando makumi maviri neshanu dze "tsvina dzekune dzimwe nyika" dzakasimba kusanganisira mapurasitiki emarara uye mapepa ekurasa mukati mebhuku rezvirambidzwa kupinza marara akasimba, ndokuzadzisa kurambidzwa kweiyi "marara ekunze" kubva muna Zvita 31, 2017. Mushure megore rekuvira uye kuita muna2018, huwandu hwekunze hwemarara epurasitiki marara ekunze muChina akadonha zvakanyanya, izvo zvakare zvakakonzera kubuda kwematambudziko emarara muEurope, America, Latin America, Asia ne Africa.
Nekuda kwekuitwa kwemitemo yakadaro, mukaha wekuraswa kwetsvina munyika dzakasiyana siyana uri kuwedzera. Nyika zhinji dzinofanira kusangana nedambudziko rekurasa marara epurasitiki uye imwe marara vega. Munguva yakapfuura, vaigona kupakurwa uye kuendeswa kuChina, asi ikozvino vanogona kungozeya kumba.
Naizvozvo, kudiwa kwekuchenesa kwepurasitiki nemidziyo yekushandisa zvakare munyika dzakasiyana siyana kuri kuwedzera nekukurumidza, kusanganisira kupwanya, kuchenesa, kurongedza, granulation nemimwe midziyo yepurasitiki, inozounza nguva yakakura yekusvetuka uye nguva yekupararira. Nekudzika kwekurambidzwa kwemarara ekunze muChina nekusimudzirwa kwekuziva nezvekurasa marara munyika dzakasiyana siyana, iyo indasitiri yekudzokororazve ichazokura mune yekuputika chimiro mumakore mashanu anotevera. Kambani yedu inowedzerawo kugadzirwa nekusimudzirwa kwemidziyo yakadaro Kuti ubate nevekunze mafambiro uye ita kuti kambani yezvigadzirwa zviwedzere kuwanda.
Mukubatana kwanhasi kwepasirese, nyika dzese dzakabatana zvakanyanya. Zvinetso zvezvakatipoteredza zvenyika imwe neimwe zvakare matambudziko ezvakatipoteredza zvevanhu vese. Muindasitiri yepurasitiki inodzokororazve, isu tine basa uye chisungo chekusimbisa iyo indasitiri yekudzokorora indasitiri uye hutongi hwezvakatipoteredza hwevanhu. Mukugadzirwa kwemidziyo yedu pachedu, asi zvakare nharaunda yese, ngatitarisane neramangwana rakanaka uye rakachena.
Ndinoshuvira vanhu venyika dzese nzvimbo yekugara yakachena uye nehupenyu huri nani uye huri nani kuvanhu vese. Hutano kukura, kusava nehanya.